Faayilii- Olkaawwii Akkafiladhu
Yoomiyyuu galmee kee akaakuu faayiliiLibreOffice keessa olkaa'i gara akaakuu faayilii alaantootta aleergitu, amalootni dhaan gessuu baay'een tarii ni badu.
Iggitaan walin Olkaa'i
Faayilichaa iggitaan hayyisa,innis faayilicha fayyadamaan banuun dura galuu qaba.
GalmeewwanLibreOffice fayyaamuudhaan dhangii XML-irratti hundaa'e qofatu iggitaan olkaa'amuu danda'a.
Qindaa'ina gingilchaa gulaali
Wardiidirqaala wwani akaakuu wtan deetaa faayiloota baayedhaa olkaa'uu qindeessuuf si'iif haayyama.
Wantoota saxaatoo filataman qofa Draw fi Impressi LibreOffice dhangii birootti alerga. Sanduuqni kun yoo mirkanaa'uu baate, galmeen hundi alergama.
Yoo gara akaakuu faayilii galmee kamittu alergitu,galmeen hunduu alergama.
Alerguu Barruu Fayilootaa
Title is: Akka-----olkaa'i